Xulafada Sacuudiga oo weli ku adkeysanaya Xayiraada dalka Qatar – Balcad.com Teyteyleey
Xulafada Sacuudiga oo weli ku adkeysanaya Xayiraada dalka Qatar
By Abdihakin Yousuf	 On Jul 31, 2017
Wadamada Xulafada Sacuudiga ee Xayiraada kusoo rogay dalka Qatar ayaa kulankoodii ay shalay ku yeesheen dalka Baxreyn markale kasoo saaray war ay ku xoojinayaan go’aankoodii hore.
Wasiirada Arrimaha Dibada ee dalalka Sacuudiga, Imaaraatiga, Masar iyo Baxreyn oo ku kulmay magaalada Manama ayaa sheegay inaysan dib uga noqon doonin 13kii qodob oo ay horey ugu xireen Qatar inay kasoo baxdo.
Waxaa qodobadaasi kamid ahaa in Doxa xiriirka u jarto Iran, joojinta dhismaha Saldhiga Militari ee Turkiga, xiritaanka warbaahinta Aljazeera iyo joojin taageerida kooxaha argagaxisada ah.
Kulankii Axadii shalay ka dhacay Manama ayaa u muuqday in wax cusub aysan kusoo kordhin xulafada Sacuudiga go’aamadoodii hore.
Wasiirka Arrimaha Dibada ee Qatar Maxamed Abdulrahman al Thani ayaa shirkii shalay ee Manama ee xulafada Sacuudiga ku tilmaamay mid astaan u ah in dalalkaasi aysan heyn wax siyaasad cusub ah oo aan ka aheyn madax adeygii iyo macangag-nimadii lagu yiqiinay, waa siduu hadalka u dhigayee.
Xulafada Sacuudiga ayaa dhinaca kale iska fogeeyey eedeynta ah in ay siyaasad u rogeen cibaadada Xajka oo ay xayiraad saareen xujeyda kasoo jeeda dalka Qatar ee doonaya sanadkan inay tagaan Makka.
Inkastoo Sacuudiga arrintan beeniyey ayuu hadana weli sheegayaa in Muwaadiniinta Qatar ee Xajka u imaanaya Sacuudiga ay kasoo bixi karaan magaalada Doxa oo kaliya, taasi oo caqabad ku ah Qurbo joogta reer Qatar ee aan joogin Doxa ama ku nool dalalka kale inay toos u tagaan Xajka.
The post Xulafada Sacuudiga oo weli ku adkeysanaya Xayiraada dalka Qatar appeared first on Ilwareed Online.
Ra’iisal wasaare Khayre oo sheegay in hal dhinac looga soo wada jeesto dagaalka Al-Shabaab